khaingthinzarmyint၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
မိန်းကလေးbagoBahamas Like0members like this
ဘလော့များဆွေးနွေးချက်များအဖွဲ့များဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ khaingthinzarmyint's Likes လက်ခံရထားသောလက်ဆောင်များ
နီစံ (အနီ) leftacomment for khaingthinzarmyint"မင်္ဂလာပါရှင်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
မိမိမေလ်းထဲမှ…"May 20, 2012khaingthinzarmyint ဓမ္မ မိတ်ဆွေအသစ်တစ်ယောက်ကို ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်May 20, 2012 ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺.... မှတရားဓမ္မများကိုလေ့လာမှတ်သားကျင့်ကြံကြိုးစား
3:13am အချိန်July 5, 2012, တွင်Mrs Stella Kwale မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ Good Day,
How is everything with you, I picked interest on you after going through your short profile and deemed it necessary to write you immediately. I have something very vital to disclose to you, but I found it difficult to express myself here, since it'sapublic site.Could you please get back to me on:( mrsstellakwale58@hotmail.fr ) for the full details.
Mrs Stella. 7:07pm အချိန်May 20, 2012, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါရှင်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
5:11pm အချိန်May 20, 2012, တွင်ဇော်ထက်မောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ လို့ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်လေးထဲမှ ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ တရားတော်များကို လွတ်လပ်စွာ နာယူ၊ မှတ်သား၊ လေ့လာ၊ မေးမြန်း၊ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကြိုတာ နောက်ကျခဲ့သည်ရှိသော် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်း မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ တရားတော်များကို ကိုယ်တိုင် သိမြင် ခံစားနိုင်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။ မှတ်ချက်ရေးသားတဲ့သူလုံးဝမရှိသေးပါ။
K L S ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
မဟာ သရဏဂုံ တော်ကြီး
ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ အကြောင်း အရှင်ဝိမလဝံသ(နာလန္ဒာတက္ကသိုလ် ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ)
လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အထဲမှာ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ဆိုတာ ဘာဖြစ်မလဲ ?။
အနာထပိဏ် နဲ့ ၀ိသာခါ…
2. ဣဿာ မစ္ဆရိယ ဟူသည်.....
3. ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် လည်ပုံပြတ်ပုံ တရားကို အလွယ်တကူ နားလည် သဘောပေါက်ကြစေရန်။
4. "ဗုဒ္ဓဘာသာကို အမြစ်ပြတ် ဖြိုခွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သံလျင်မြို့စားငဇင်ကာ"
6. "မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)
7. အရှင်မောဂ္ဂလန် မထေရ်မြတ်ကြီး အလောင်းတော်, တရားထူးရသွားသော တရားတော်။
8. ၁၃၇၅-ခုနှစ် ၀ါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်မည့်ကျောင်းကို အသိပေးကြေညာခြင်း
9. တောင်ပြာတန်းမှာ ကြွေသောပန်းများ(သို့မဟုတ်)ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် အသက်စတေး၍ ပေးဆပ်ခဲ့သူများ.. …
10. သောတာပန်၏ ထူးခြားချက်(၇)ရပ်
11. ဘာသာခြားတစ်ဦးနှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့ရာဝယ်
12. ** ပုရိသတို့အတွက် သတိပြုဖွယ် မြွေအန္တရာယ် **
13. တကယ့် ဥပေက္ခာဆိုတာ
14. လောကဓံမုန်တိုင်းများ နှင့် ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထား
17. "၂၀၁၃-ခုနှစ်၊ ဧပြီလ တစ်လတာအတွင်း နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံး ဓမ္မဘလော့ဘ်တစ်ပုဒ် ကြေညာခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်"
19. အလှူပွဲကြီး အောင်ပါပြီ.............
20. စွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အမေး ၊ အဖြေ များ (၁)
Top News · Everything မူကြိုဆရာ posted blog postsမဟာသမယသုတ် (မြန်မာပြန်)“… ဓမ္မပဒဂုဏ်ရည် …”သာသနာမည်သူ ပြုသနည်6း more…38 minutes agoThaung Tan postedablog postအဓိပတိ(၃)ပါးထားပြီး တရားအားထုတ်ပါကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတမိုးကုတ်ဆ၇ာတော်ဘုရားကြီးက ယောဂီများတရားအားထုတ်တဲ့အခါ အဓိပတိ(၃)ပါးထားပြီး…See More1 hour ago 0
Soe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'သောတာပန် ကာမဂုဏ်ခံစားမှုနှင့် ပုထုဇဉ်တို့ ခံစားမှုဟာ အတူတူပဲ မဟုတ်လား'2 hours agoSoe Gyi shared မြတ်သွင်ကို's blog post on Facebookပုဗ္ဗ မုဉ္စ အပရစေတနာ ဆိုတာ..2 hours agoSoe Gyi liked မြတ်သွင်ကို's blog post 'ပုဗ္ဗ မုဉ္စ အပရစေတနာ ဆိုတာ..'2 hours agoSoe Gyi liked thein wai's blog post 'လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အထဲမှာ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ဆိုတာ ဘာဖြစ်မလဲ ?။'2 hours agoSoe Gyi shared dimplemit's blog post on Facebookတန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည် ....၃3 hours agoSoe Gyi liked dimplemit's blog post 'တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည် ....၃'3 hours agoSoe Gyi shared dimplemit's blog post on Facebookတန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည်....၂3 hours agoSoe Gyi liked dimplemit's blog post 'တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည်....၂'3 hours agoSoe Gyi shared dimplemit's blog post on Facebookတန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည်....၁3 hours agoSoe Gyi liked dimplemit's blog post 'တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည်....၁'3 hours ago More... RSS